Nyefee MP3 ka iPad enweghị iTunes mmekọrịta
Otú nyefee MP3 ka iPad na / enweghị iTunes mmekọrịta
E nwere ọtụtụ uru nke na-eji iTunes ka mmekọrịta music na ndị ọzọ na mgbasa ozi faịlụ gafee multiple iOS ngwaọrụ ma n'otu oge o nwere ọtụtụ ọghọm dị ka mma. The data transfer bụ kwa mgbagwoju na abuo a onye nwere na-tech savvy mgbe ọ na-abịa iTunes ojiji. Na okwu dị mfe a newbie adịghị ike na-eji software omume na ala na afọ ojuju dị ka ya na atụmatụ dị oke mgbagwoju. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na niile music faịlụ format na-adịghị akwado site na software na ya mere ọ na-aghọ isi na-awa mgbe onye ọrụ chọrọ ka mmekọrịta a music faịlụ usoro nke a na-adịghị akwado site na usoro ihe omume.
Part1: Nyefee MP3 ka iPad na TunesGo
Part2: Nyefee MP3 ka iPad na iTunes
Part3: uru na ọghọm
Part4: Nyefee MP3 ka iPad na Media Enwe
Part5: uru na ọghọm
Part1: Nyefee MP3 ka iPad (iOS 9 akwado) na TunesGo
TunesGo na e mepụtara Wondershare bụ eleghị anya otu nke kasị mma software niile ugboro dị ka ọ na-enye ohere ọrụ iji nweta a nzọụkwụ n'ihu nke ọzọ na syncing music faịlụ na ndị ọzọ ntụrụndụ media. E nwere ọtụtụ uru nke na-eji ihe omume a na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ka ndị a:
TunesGo Resource ziri ezi ebe a:
Ọ nwere ike na nyefee MP3 ka iPhone mgbe mmekọrịta na ọ bụkwa na-ahụ kwuru na usoro akwadoghi usoro ihe omume.
The n'ozuzu ọdịdị nke usoro ihe omume dị mfe iji na ọ bụghị mgbagwoju mgbe niile.
The software na-ahụ na faịlụ na-converted kwesịrị ekwesị format mgbe ha na-kpọfere iTunes.
Otu n'ime egwu ọrụ nke usoro ihe omume bụ na ọ pụrụ akpaghị aka ịgbakwunye music ID3 mkpado
m. Onye ọrụ kwesịrị ka ibudata usoro ihe omume site na ịga na URL http://www.wondershare.com/tunesgo/ na-esonụ kpaliri na-egosi na-echichi mere. Ozugbo ọ e mere isi interface nke usoro ihe omume na-egosi:
ii. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ijikọ iPad na kọmputa mere na usoro malitere, sị:
III. Ozugbo software na-achọpụta rụọ iDevice-esonụ na ihuenyo ga-apụta. Niile music nke ngwaọrụ ga-weghaara omume nke bụkwa otu n'ime nke egwu functionalities nke usoro ihe omume:
too ogologo. Nke a na usoro-enye ohere onye ọrụ na-eme ka n'aka na MP3 na-converted na kpọfere iDevice. Onye ọrụ dị nnọọ mkpa ka-eso ụzọ ibubata> Bubata si PC
v. Ozugbo MP3 format na-synced ma ọ bụ dị ka software ọ ga-akpaghị aka mmekọrịta na iPad na jikọọ. Ọ bụrụ na nyefe a chọrọ iji ọzọ iDevice na nwekwara ike jikọọ jide n'aka na otu ọdịnaya na-agafere na ya dị ka nke ọma.
Part 2.Transfer MP3 ka iPad (iOS 9) na iTunes
N'ihi na ụfọdụ ndị ọrụ a nke nwere ike ịbụ a nsogbu ma a nkuzi e dere eburu n'uche mbipụta na-chere ihu a nkịtị onye ọrụ na nke a. Iji na-enweta needful mere ọ na-gwara iji jide n'aka na usoro na e kwuru ebe a na-soro nzọụkwụ site nzọụkwụ zere ihe ọ bụla aghara:
m. Onye ọrụ kwesịrị imeghe iTunes na kọmputa enweghị ihe ọ bụla na ngwaọrụ njikọ na-eso ụzọ File> Tinye nchekwa n'ọbá akwụkwọ
ii. Nchekwa na bụ na-kwukwara ga-emi odude na na PC ma ọ bụ Mac:
III. Ozugbo ọdịnaya nke nchekwa bụ dị ọ ga-atụkwasịkwara na iTunes Akwụkwọ:
too ogologo. Na-etinye music iji onye ọrụ kwesịrị ka-eso ụzọ Ndetuta egwu ọkpụkpọ> nso nso kwukwara, sị:
v. The ọrụ na onye ga mgbe ahụ nwere iji mezie pịa na nso nso dị songs ma ọ bụ mgbasa ozi na-eme ka n'aka na yiri Ama-achịkọta:
vi. Na-esonụ window onye ọrụ nwere ike dezie Ama dị ka kwa chọrọ aka ịchọta ndị na-adịbeghị anya dị songs mfe:
VII. Ịgbanwe ndondo kwukwara dị songs ka Mp3 mere na ha na-aghọ dakọtara na iDevice onye ọrụ kwesịrị ka-eso ụzọ Dezie> Mmasị> General> ibubata ntọala:
nke Asatọ. Na-esote mkparịta ụka igbe ga-ajụ onye ọrụ banyere format ha chọrọ iji tọghata songs ka:
Itoolu. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ka a mata na ihe ziri ezi pịa songs ike ha MP3 version:
x. The MP3 faịlụ ga-kere na mbụ faịlụ ga-pụta ìhè. See Nhichapụ button ina-arụ ọrụ mere na mezue usoro:
Iri na Otu. Ozugbo ọ e mere na iPad nwere ike synced na iTunes iji jide n'aka na mp3 songs na-dị ka usoro ihe omume na-synced mfe na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Part 3. uru na ọghọm
Ozugbo songs na-dị ka iTunes ọ dị mfe ka mmekọrịta ha na ihe ọ bụla iDevice ọzọ karịa lekwasịrị otu.
Usoro bụ ogologo na jupụtara hassle maka a ọhụrụ ọrụ na ya mere maka a newbie ọ bụghị apụtakarị mgbe niile.
The iTunes jide n'aka na mbụ audio faịlụ na-pụta ìhè nke mere na ha na-ehichapụ zere mbiputegharị nke ọdịnaya.
Part 4.Transfer MP3 ka iPad na Media Enwe
Media Enwe bụ a software omume na a na-eji jide n'aka na music jisiri na na PC, Mac nakwa dị ka na ngwaọrụ na bụ mmekọrịta na ya. Na nkezi ahịa nkwado na egwu atụmatụ na e agbakwunyere n'ime usoro ihe omume ọ na-aghọ onye nke kasị mma nhọrọ maka ndị chọrọ jikwaa ha music kpọrọ ihe nke ukwuu. Ọ na-akwado niile faịlụ formats na maka otu ihe dị iche iche forums udu software dị ka otu n'ime ndị kasị mma nke niile.
Na-esonụ bụ usoro na-eji nyefee MP3 ka iPad ma ọ bụ iji ọ bụla na ngwaọrụ na iji Media enwe:
m. Ngwaọrụ bụ ike jikọọ kọmputa:
ii. Ẹkedori Media Enwe software omume na esesịn e arụnyere na n'elu usoro:
III. N'ime akpaaka mmekọrịta ndepụta akara niile music mere na MP3 faịlụ na-emi odude ke draịvụ ike na-weghaara:
too ogologo. N'ime akpaaka mmekọrịta nhọrọ họrọ nhọrọ "Auto mmekọrịta ka anya dị ka ngwaọrụ jikọọ" Iji zere usoro a na-eme n'ọdịnihu:
v. Iji mee ka n'aka na Media Enwe anya dị ka iTunes ọ na-gwara iji jide n'aka na ndị na-esonụ ntọala na-adịkwa:
vi. Onye ọrụ ahụ kwesịrị see iPad button n'ime isi menu ka mmekọrịta egwu na rụchaa usoro:
Part 5.Pros na ọghọm
Nke a na-eme ka software n'aka na ihe ọmụma banyere tracks bụ normalized na kpọfere ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka mma.
The ahịa nkwado nke software omume bụghị ruo akara na ọ bụ otu n'ime nsogbu ndị na ọrụ na-eche ihu na nke a.
The Auto DJ arụmọrụ nke software na-ekpebi na otú ọtụtụ songs na-queued na ugbu a ayak ndepụta.
Undelete iPad: undelete na Nnapụta furu efu Data on iPad
Olee otú iji hazie Photos on iPad
Top 5 uzo ozo nke VLC maka iPad
Esi ọcha iPad
Nchekwa na Mfe Method iji Hichapụ iPad Akaụntụ.
Nyefee Photos si iPad ka USB Flash Drive
Olee otú ndabere iPad faịlụ ka mpụga ike mbanye
Olee otú Ọkụ iPad Air vidiyo na DVD
Olee otú Ọkụ iPad Obere 2 vidiyo na DVD
> Resource> iPad> otú nyefee MP3 ka iPad na / enweghị iTunes mmekọrịta